Abalị a bụ abalị dị ịtụnanya. Andfọdụ ndị enyi m gara ịhụ Eric Davis ka ọ gosi otu ihe ngosi ya, Red Bastard, na ihe nkiri Indy Fringe. Ihe ngosi a dị ịtụnanya, na-adọta ndị na-ege ntị ma jiri nwayọ na-ebibi onye ọ bụla na-ege ntị otu otu. N’otu oge ihe nkiri a, a na-ajụ ndị na-ege ntị ihe nrọ ha… na-esochi ajụjụ gbasara ihe ha na-eme. Red Bastard na-agwakwa mmadụ ka ọ were